Njengomthetho, izibini ezonwabileyo zingabonwa kuphela kwi-cinema. Apho banokunyamekela omnye nomnye, banqobe ubunzima kunye, kwaye nangona bengavumelani, bafumana lula ukungqinelana. Kuthiwani ngokuphila kwangempela? Ngaba ngokwenene akukho ziqabane ezonwabileyo?
Ninyamekele omnye nomnye . Sijwayele ukuqwalasela iimpawu zothando oluhle lwezinto ezintle - izipho ezibizayo, iziqhamo ze roses nezinto. Kodwa ukugcina uthando kubaluleke ngakumbi kunezinto eziqhelekileyo zemihla ngemihla. Ngokomzekelo, umyeni ekuboneni umkhwelo omtsha wengubo yakhe yokugcoba. Okanye umfazi, eyazi ukuba umyeni wakhe unomlutha wewayini elilungileyo, uya kulahlwa ukuthenga ibhotile ehambelana nayo. Nangona kunjalo, indlela apho ibinzana elithi "Kulungile!" Lithetha, lingacacisa amandla okuvakalelwa.
Enyanisweni, ngaphezu kweminyaka i-routine idonsa isiqhotyoshelweyo, kwaye kuyimfuneko ukuthulula umlambo omtsha kulwalamano. Esinye isazi senzululwazi senze uvavanyo: wanika isibini esinesibini esihlala ndawonye kunye, umsebenzi - ngelixa babefanele benze into emnandi komnye nomnye kwaye emva kokufumana ikhuphoni evela kumlingane. Injongo yayikukuqokelela inani elilinganayo lamakhuphoni bobabini. Umdlalo wathwala kakhulu kangangokuba eso sibini salibala malunga nokuzama kwaye saqhubeka sizathu. Kwaye kubaluleke kakhulu, bavuselela ubudlelwane babo nomnye.
Ukufumana ukulungelelanisa . Kwiintsapho ezonwabileyo, ukunyaniseka akuthethi ukuba elinye lamalingani lenza idini. Umzekelo, umbuzo wendlela yokuchitha iveki, kungcono ukuxoxa ngeLwesine, ukushiya zombini ithuba lokufeza umnqweno wabo kunye nokudibana nomlingane wabo. Ukuba umntu ufuna ukuphuma edolophini kunye nomnye ukuya kumdlalo webhola, uze ufike kwi-cinema, kwaye ngosuku olulandelayo ungaya kuyo nayiphi na enye yalabo abatshatileyo. Into eyona nto kukuba baxoxe ngxaki kunye, kwaye musa ukubeka omnye phambi kwento ngoMgqibelo ekuseni.
Qondana . Kwiintsapho apho yonke into eyahlukileyo, umfazi, eva ukuvakala komnyango evuliwe, ngokukhawuleza uqala ukukhalaza kumyeni wakhe malunga nobunzima obubekwe emahlombe akhe: ukuhlamba, ukucoca, ukukhulisa abantwana njalonjalo. Yaye ukuba indoda iyayiphendula? Isiphumo siqikelelwa.
Kwiintsapho ezonwabileyo, umfazi, kunye neengxaki ezifanayo, kwisandi somnyango ovulekileyo, uthatha umoya ophefumulayo aze ahlangane naye ngokumomotheka, aze acwangcise ngengqondo yonke into yakhe. Ngaloo mzuzwana, kukho utshintshiselwano lwemiyalezo: "Unjani, othandekayo?" - "Unjani, othandekayo?" Kwaye ke kuphela - iinkcukacha ongazifuni ukuzenza kwifom ekhunjayo neyinkathazo.
Khangela iindlela ezintsha zokusombulula iingxaki zesikhathi esidala . Ngokuphindaphindiweyo, kwintsapho ephumelelayo kukho "isikhubekiso", malunga nokuba ngabafazi ba "khubekisa" ixesha elide, emva koko bawunqumla, baze basombulule kunye okanye bangaphumeleli.
Kwaye kukho enye indlela eya kunceda ukusika le nqopu kanye kunye. Ukufumana isisombululo sesithathu esifanelekayo kokubili kunzima, kodwa kunokwenzeka. Kwintsapho enye, inkathazo edelele yayivakashele ikhaya labo abazali, elihlala liphela "kwinqaku eliphezulu." Isigqibo sasibuhlungu, kodwa sasifaneleka wonke umntu: iintlanganiso zafudukela kwintsimi engathathi hlangothi, apho abazali abazange bakwazi ukufumana isizathu sokuba bafumane iphoso kwaye baqale ukufunda ukuziphatha kwabaselula. Ukuzinza nokuthula kwafika endlwini ngenxa yombono omtsha.
Yazi umda wokuvunyelwa . Akunabantu abalinganayo kwihlabathi, nokuba phakathi kwabo bathandana ubomi babo bonke. Wonke umntu une "chip" yakhe, kwaye ukuqonda ngokufanayo kuza xa kukho nawuphi na iqabane eliqaphelayo le nyaniso. Umfazi uyakuthanda ukudansa, kunye nomyeni wakhe-ukukrazula. Uyesaba iindawo eziphakamileyo kunye nentsika evela kwi-summit ayiyikumkhohlisa, kodwa lona wesifazane uye waba nesibindi waza wamomotheka, ufana neentlanzi zokoyika, wehla ezimbalwa. Wayexabisa isenzo sakhe, kwaye ngokuhlwa, lo mbhangqwana waya kwiklabhu, apho wayidansa ngayo yonke intliziyo yakhe, waza waqhwaba. Kodwa ngosuku olulandelayo akukho mntu wayefuna imibingelelo evela komnye. Waya kwi-ski track, wayedlala ngokuhlwa, kwaye akukho mntu wayephethe. Abafazi baqaphela ukuba wonk 'ubani unelungelo lokuthile, kwaye oku akukuchaphazeli ulwalamano lwabo nonke.
Musa ukulibala ukuhleka . Ukuhleka yindlela elula kunye neyona ndlela iphumelelayo yokuxinwa kwengcinezelo. Ukuba ufumana umthombo wakho wamahlaya, owaziwa kuphela kubini, ke ingxaki ayiyi kuba yingxaki. Abo bangakwazi ukufumana isizathu sokuhleka kwehlaya, bahlala bekhulile ngaphambi kwexesha kwaye bafikeleleke kwiindawo zonxibelelwano. Kulula nalabo abachaphazelayo ngokuzonwabisa, banomdla kwaye bahleka. Izibini ezonwabileyo zinokuhlala zihlala, zithi, zifundwe kunye nevesi eliqhawulayo elivela encwadini, kuba ngokuhamba kwexesha banendlela efanayo kwizinto zonke, kuquka ukuhleka. Ngoko basondela ngakumbi. Eyona, i-apotheosis kakhulu - amaqabane angakwazi ukuhleka ukulala etaweni, leyo, ngokungathandabuzekiyo, iyomeleza iimvakalelo.
Ukukwazi iingcamango zomnye nomnye . Kwiintsapho ezonwabileyo, ibinzana alwamkelekanga: "Ucinga ukuba ndicinga ..." Musa ukuthatha ingxaki ekucingeni iqabane. Le shishini elingenakubonga, ngakumbi ukwenzela ukuba wenze kwaye wenze iphutha. Kukulungele ukuqala ingxoxo ngombuzo othi "Ucinga ntoni ..." kwaye udumise ukuba ukuqiqa kwakho kuhambelana. Kuya kukukholisa umlingane, kwaye uya kuba nethuba elitsha lokuxelela omnye onothando uthando ohlala ufuna ukuva kunoma yimuphi umntu.
Indlela yokutshata umgidi-mali?
Unokuhlangabezana njani nothando olungathandabuzekiyo?
Ingulube nge zucchini
Abazali bam bandinika indawo yokukhusela
Iipropati eziwusizo ze-avocado nezithelo zentshiseko
EMoscow umboniso othi "Iifashoni zizalelwa njani: iminyaka eyi-100 yokufotowa"
Ndiyamthanda bobabini abakhethayo, andazi
Isaladi yeklabishi ngemifuma
I-Beetroot igumbi lokudlela, izakhiwo zayo eziwusizo
Umdlavuza wezilwanyana ufumanisa njani ukukhulelwa?